‘धाराको टुटी’ खोसिएर के भो ! धराने जनताको ‘लौरो’ लिएर हर्क साम्पाङले इतिहास रचे « News24 : Premium News Channel
‘धाराको टुटी’ खोसिएर के भो ! धराने जनताको ‘लौरो’ लिएर हर्क साम्पाङले इतिहास रचे
काठमाडौं । हार, जितको परिभाषा सोध्नु हर्क साम्पाङलाई । न हार्दा दुःखी छ न जित्दा नै औँधी खुसी । खुसी छन् त उनी धराने जनताकै लागि छन् । न पार्टी, न अघि पछि कार्यकर्ता । अविचलित यात्री झैँ उनी एक्लै चुनावी यात्रामा हिँडे, जिते । एक ज्याद्रो योद्धा जो लडाइँमा गएर हारेर फर्कंदैन, किन ढिला नहोस् ?
‘मलाई मौका दिनुपर्छ, पाइन भने त्यहिँ हो,’ हर्क साम्पाङ एक्लै चुनावी अभियानमा यसरी हिँडे । ‘तपाईलाई हाल्न त हुने हो, जितिने होइन होला ?,’ अघिपछि कोही नलिई एक्लै हिँडेका उनलाई देख्ने मतदाताहरु यसो भन्थे । तर, हर्क भन्थे, ‘यसपाली हामी जित्छौँ ।’
उनको चुनावी अभियान हेर्दा लाग्छ उनी र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) शाह एउटै हुन कि क्या हो ! शरीरमा नेपालको झण्डा बोकेको छ, हिँडेको छ । तर, दुईमा बिल्कुलै फरक छ– गायक भएको नाताले बालेनका अघि पछि उनका फ्यान, समर्थक सयौँ हुन्छन् तर, हर्कका पछाडि न कुनै समर्थकहरु नाराबाजीमा छन्, उनी एक्लै भोट माग्दै, आफ्नो भिजन सुनाइ हिँड्छन् ।
एक्लै भोट मागेर हिँड्ने उनै हर्क अहिले पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार किशोर राईलाई ४ हजार ७६२ मतान्तरले हराए । हर्कले २० हजार ८ सय २१ मत पाए भने पाँच दलबाट चुनिएका किशोर १६ हजार ५९ मत पाए ।
यसअघिको २०७६ को उपनिर्वाचनमा हर्कले चुनाव चिह्न पानीको बोतल लिएर उम्मेदवार बने । तर, उनी भारी मतका साथ नेपाली कांग्रेसका तिलक राईसँग हार व्यहोरे । तिलकले २६ हजार ७ सय ९ मत पाउँदा उनले ४२२ मत पाए ।
हार, जितलाई एउटा खेल मानेका उनी आफ्नो भिजनसँग सदैव अडिग रहे । धराने जनतालाई सप्तकोशीको पानी खुवाइ छाड्ने चट्टानी अडान लिइरहे । वीपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको वेथिती सच्याउन लागिरहे । जनताका घरघरमा पुगिरहे । व्यक्तिगत नाफाका लागि होइन जनताको सुःखका लागि उनी त्यहाँ गइरहे । यो छोटो पहिचान हो हर्क साम्पाङको ।
वि.सं २०३९ सालमा खोटाङमा जन्मिएका हुन् हर्क। लाहुरे परिवारका साम्पाङले धरानकै महेन्द्र क्याम्पसबाट स्नातक पूरा गरेका छन् । देशको परिस्थिति र बाध्यताले रोजगारीका लागि इराक, अफगानिस्तान पुगे ।
घरि गितार बजाएर गीतमार्फत त घरि माइक बोकेर एक्लै सडकमा उभिएर धरानको परिकल्पना गरिरहे । धरान बनाउने सपना बाँडिरहे । यी सब देखेर धेरैलाई नसोचका होइनन्– पागल हो कि क्या हो । अक्सर दुनियाँ पागलहरुले नै हाँक्ने गर्छन्, भिजनमा पागल नहुँदा देश दुर्गतितिर फसिरहेको छ । त्यसैल त जन्मिएका छन्, हर्क साम्पाङजस्ता योद्धाहरु ।
हर्कलाई हराउन गठबन्धनका दलले उनले लिन लागेको चुनाव चिन्ह ‘धाराको टुटी’ नै खासे । गठबन्धनका दलहरुकै प्रपञ्चमा अर्कै व्यक्तिलाई स्वतन्त्र उठाएर धाराको टुटी दिइयो । हर्कलाई चुनाव चिन्ह होइन धराने जनताको मनको चिन्हको खाँचो थियो ।
त्यसपछि हर्कले चुनाव चिन्ह पाए– ‘लौरो’ । बालेन शाहको चुनावी नारा याद गर्ने हो भने– ‘बाआमालाई टेक्न मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेक्न मिल्ने’ । यहिँ लौरा चुनाव चिह्न लिएर उनी एक्लै चुनावी अभियानमा हिँडे । पानीको हाहाकार हुने धरानमा आखिर ‘धाराको टुटी’ चुनाव चिन्ह नपाएर के भो ! धराने जनताले रोजेको ‘लौरो’ नै काफी भयो ।
जितपछि आगामी यात्राबारे सञ्चारकर्मीले सोधेका विविध प्रश्नमध्ये उनले एउटा प्रश्नको जवाफ दिइदिए– ‘खानेपानीको समाधान नभएसम्म फिल्डमै हुन्छु, अफिसमा बस्दिनँ ।’